के होसियार मानिस घर नबसे हुन्छ त? #covid19 • Health News Nepal
Dr Biplav Adhikari
✍️ डा.बिप्लव अधिकारी
डेन्टल सर्जन प्रिमियर डेन्टल कोभिड 19 को पहिलो संक्रमण जनाबर बाट भएको आशङ्का गरिएपनि त्यसपछिका सबै संक्रमण कुनै न कुनै कारणले कोभिड 19 को संक्रमित सङ्गको प्रत्यक्ष संपर्क बाट भएको पुष्टि भएको छ।
हाम्रो देशमा एकथरी यस्तो सोच भएका मानिसहरु छन् जसले आफूलाई चलाख र होसियार ठान्छन्। उनिहरु संकास्पद र रोगी मानिस, सुरक्षाकर्मी नजिक जाँदैनन्, मास्क लगाउछन् र साथीभाई भेट्छन् अनि होसियार छु भनेर निर्धक्क पर्छन्। के यो ठीक हो? मलाई लाग्छ त्यस्ता मानिसले “ऊष्मायन अबधि” भन्ने शब्द कहिले नसुनेको वा सुने पनि यसको अर्थ नबुझेको हुनुपर्छ। Incubation Period लाई नेपालीमा ऊष्मायन अबधि भनिन्छ।
कुनै मानिसलाई कोभिड 19 वा अन्य सरुवा रोगको संक्रमण हुने बित्तिकै रोगको लक्षण र असर देखिदैन। संक्रमण भएपछि रोगको लक्षण देखिन शरीरमा रोगको किटाणुको मात्रा बढेर एउटा बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शबल भएको अबस्थामा यस्तो बिन्दु नपुग्ने र रोगको लक्षण नदेखि रोग ठीक हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरुमा किटाणुको त्यस बिन्दु पुगेपछि रोगका लक्षणहरु देखिन्छन्। यस्ता ऊष्मायन अबधिमा रहेका मानिसमा रोगको लक्षण नदेखिने तर यस्ता मानिसले अरू स्वास्थ्य मानिसलाई रोग सार्नसक्ने हुन्छन्। यस्ता मानिसले एक बाट अर्को मानिसलाई संक्रमण सार्ने खतरा हुन्छ। अहिले चाइना बाहेक सबै देशमा संक्रमण सार्ने यस्ता ऊष्मायन अबधिमा रहेका ब्यक्ति हुन।
तसर्थ मैले देख्दै आएका मानिसहरु जो आफूलाई होसियार, चलाख ठान्दै घर बाहिर लुखुर लुखुर गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तालाई बाठ्ठो मुर्ख भनि सम्बोधन गरेको हु। यस्तो लकडाउनको अबस्थामा रोग तपाईंको घर भित्रिनु तपाईंको बाठ्ठो पनको नतिजा नबनोस, हाम्रो कामना। घरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई संकट ल्याउने र महामारीको जोखिम निम्त्याउने नै हुन अहिलेका बाठ्ठो मुर्ख। अहिलेको एक मात्र आवश्यकता भनेको घरमै बस्ने, बाहिर ननिस्किने मात्र हो।
Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers #Covid19
भारतमा कोरोना: संक्रमीत ५३ हजार नाघ्यो , झन्डै १८सयको मृत्यु #Covid19